Smart ကျကျလေး နေထိုင်နိုင်ဖို့ - Myanmarload
Smart ကျကျလေး နေထိုင်နိုင်ဖို့
လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ် က 16:24 July 03, 2017
ဒီလိုနေထိုင်ခြင်းအားဖြင့် သင်ရရှိမဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့
၂) ကိုယ့်ကိုယ် ကို ယုံကြည်မှုရှိလာမယ်။
၃) ကိုယ်နဲ့ ပတ်သက်ရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဆီက ချီးကျူးစကား ကြားရမယ်
၄) ကျန်းမာရေး ကောင်းမယ် …. စသည်ဖြင့်ပေါ့။ “စတိုင်လ်ရှိမှ စတားဖြစ်မယ်” ဆိုတဲ့ စကားလည်း ကြားဖူးမှာပါ။ ဒီလိုနေထိုင်ခြင်းအားဖြင့် သင့်အတွက် ဆိုးကျိုးဆိုတာ မရှိသလောက်ပါပဲ။
ဒါဆို လွယ်လွယ်ကူူကူနဲ့ smart ဖြစ်အောင် ဘယ်လို နေထိုင်ရမလဲ ?
-	အဝတ်အစားကို ဂရုစိုက်ပါ။
“လူမှာ အဝတ်၊ တောင်းမှာ အကွပ်” ဆိုသလို လူတစ်ယောက်ရဲ့ အဝတ်အစားက ကိုယ့်ရဲ့ အနေအထားကို ဖော်ပြလိုက်တာပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် သင့်တော်ရာကို ဝတ်ပါ။ ကိုယ်နဲ့ လိုက်ဖက်တာကို ဝတ်ပါ။ ကိုယ် စိတ်ရှိတဲ့အတိုင်း၊ ကို်ယ်ဝတ်ချင်တဲ့ အတိုင်း ဝတ်တာထက် သူ့နေရာနဲ့ သူ လုုိက်ဖက်တာကို ဝတ်စား ဆင်ယဉ်ပါ။ အထူးသဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အဝတ်အစားနဲ့ လုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အခမ်းအနားတွေ သွားရင် သတိထားပါ။
-	ဆံပင်၊ လက်သည်း၊ ခြေသည်းနဲ့ အသားအရေကို ဂရုစိုက်ပါ။
ဒါကတော့ လူတိုင်း မြင်နေရတဲ့ အရာတွေမို့ လှပ သပ်ရပ်နေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဆံပင် ဖားလျားချထားခြင်းထက် သပ်သပ်ရပ်ရပ် စည်းထားခြင်းက ပိုပြီး သင့်တော်ပါတယ်။ လက်သည်း၊ ခြေသည်းတွေကိုလည်း ပုံမှန် ညှပ်ပေးဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ပြူးပြူးပြဲပြဲ အရောင်မဟုတ်ဘဲ သင့်တော်တဲ့ အရောင်ကို အသုံးပြုပြီး လက်သည်း၊ ခြေသည်းဆိုးပါ။ အရောင်တွေ တဝက်တပျက် ပျက်နေတာမျိုး မဖြစ်ရလေအောင် ဂရုစိုက်ပါ။ အသားအရေ လှပခြင်းကလည်း သင့်အတွက် ဂုဏ်ယူစရာ တစ်ခုပါ။ အသားညိုတာ၊ ဖြူတာနဲ့ မဆိုင်ဘဲ အသားပတ်နေတာမျိုး၊ အသားအရေ ပျက်ဆီးနေတာမျိုး မဖြစ်ရအောင် ဂရုစိုက်ပါ။
-	အလွန်အကျွံ မပြင်ဆင်ပါနဲ့။
ဒါကတော့ မိန်းကလေးတွေနဲ့ ပိုပြီး ပတ်သက်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့့် မိတ်ကပ်လိမ်းခြယ်တဲ့ အခါ အလွန်အကျွံ ပြင်ဆင်ခြင်းက သင့်ကို မြင်ရ တွေ့ရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က သင့်ကို တစ်မျိုးတစ်ဖုံ ကောက်ချက််ချပါလိမ့်မယ်။ Smart ကျကျ လှပချင်တယ်ဆိုရင်တော့ မိတ်ကပ်ကိုလည်း အဝတ်အစားလိုပဲ သင့်တော်သလို လိမ်းခြယ်ပါ။ ယောကျ်ားလေးဖြစ်ဖြစ် မိတ်ကပ်လေးဖြစ်ဖြစ် Accessories တွေကိုလည်း အလွန်အကျွံ မသုံးမိဖို့/မဝတ်စားမိဖို့ ထပ်ပြီး သတိပေးပါရစေနော်။
-	ခံတွင်းနံကို ဂရုစိုက်ပါ။
လူချင်းတွေ့ပြီးတာနောက် စကားပြောကြတာမို့ ခံတွင်းနံ့ကလည်း အင်မတန် အရေးကြီးပါတယ်။ သင့်ခံတွင်းနံ့ကို သတိထားပါ။ အပြင်သွားလျှင်ဖြစ်စေ လုပ်ငန်းခွင်မှာဖြစ်စေ အစားအသောက် ဆင်ခြင်ပါ။ ခံတွင်းနံ့ဆိုးစေမဲ့ အစားအသောက်များကို ရှောင်ပါ။ ခံတွင်းနံ့ ဆေးရည်ကို အသုံးပြုပါ။ ဝမ်းချုပ် မခံပါနှင့်။ ဒါကလည်း ခံတွင်းနံ့ကို ဆိုးစေတဲ့ အချက်တစ်ခုပါပဲ။
-	အလှကုန် ပစ္စည်းတွေကို အသုံးပြုပါ။
ဒီလိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်လည်း သင့်ရဲ့ အလှအပကို ခိုင်မာအောင် တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ - ရေမွှေး အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင့်ရဲ့ ကိုယ်သင်းနံ့ကို ထိန်းထားနိုင်မှာပါ။ Mask အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင့်မျက်နှာ အသားအရေ၊ အရေးအကြောင်း စသည် စသည်ဖြင့် မိမိနှင့် သင့်တော် ကိုက်ညီသော အလှကုန် ပစ္စည်းတွေကို အသုံးပြုပါ။
-	သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှု ရှိပါ။
ဒီအချက်ကတော့ အပေါ်က အချက်တွေ အားလုံးကို ရည်ညွှန်းပြီး သန့်ရှင်း သပ်ရပ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ အဝတ်အစားဆိုလည်း လျှော်ပြီး မီးပူတိုက်ထားသော အဝတ်ကို ဝတ်ဆင်ခြင်းက သင့်အတွက် ကြည့်ကောင်းနေမှာ အမှန်ပါ။ မိတ်ကပ်တွေကိုလည်း expired date တွေ ဂရုစိုက်ပါ။ ဆံပင်မှ အန့ံ မရစေရန် ခေါင်းကို ပုံမှန်လျှော်ပေးပါ။ သင်နဲ့ ပတ်သက်သမျှ သင့်အလှအပနဲ့ ပတ်သက်သမျှ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်နေမယ်ဆို သင့်ကျန်းမာရေးကိုလည်း အထူးတလည် ဂရုစိုက်ရန် မလို်တော့ပါဘူး။
Page generated in 0.2154 seconds with5database query and6memcached query.